IGenius yokuThengisa kaJim Irsay | Martech Zone
IGenius yokuThengisa kaJim Irsay
NgoMvulo, nge-3 kaJanuwari, 2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 URobby Slaughter
Nge-Cawa, i-Indianapolis Colts yoyise i-Tennessee Titans ukuba ibe yi-AFC South Champions. Phambi komdlalo, nangona kunjalo, umnini wee-Colts uJim Irsay wenza iphulo lokuthengisa eliqaqambileyo kwi-Twitter.
Kwimeko apho ubungakhange uphakamise iinkcukacha, masiqwalasele ii-tweets zika-Irsay ukusukela nge-31 kaDisemba:
UKUZE UPHUMELELE I-PRIUS Kunye ne- $ 4K- Nge-1: 15 emva kwemini ngale Cawa kuzakubakhona uPrius omnyama omiswe kumaphandle angaphandle ngaphandle kweLucas Oil Stadium…
UKUZE UPHUMELELE I-PRIUS Kunye ne-4K yeedola- Abangeneleli kufuneka babe ne-18 yrs okanye ngaphezulu KUNYE nokulandela @jimirsay kuTwitter.com…
UKUZE UPHUMELELE I-PRIUS Kunye ne-4K yeedola-Ungeniso lube LUNYE umntu ngamnye, ungeniso oluninzi alukufanelekanga (awudlali)!…
UKUPHUMELELA I-PRIUS KUNYE ne- $ 4K- Nge-1pm ngale Cawa ndiza kuthumela umbuzo nge-tweet. Ungangena nge-tweet impendulo yakho.
UKUZE Uphumelele i-PRIUS Kunye ne-4K yeedola- I-Ur tweet KUFUNEKA ibe negama lakho njengoko livela kwilayisensi yakho yokuqhuba kwaye ubandakanye i- @ jimirsay KUNYE #iiprotocol.
Masiziyeke izibonelelo ezicacileyo zolu hlobo lokunyusa. Nanini na xa unika ibhaso elixabisekileyo, uvelisa i-buzz eninzi kunye nomdla kwi-brand. Uyomeleza ukunyaniseka. Wenza abantu abaninzi bonwabe, kwaye umntu omnye onokuba nolonwabo olukhulu. Ukhuphiswano luhlala lukhulu.
Kodwa iqela lokuthengisa laseColts lenze into entle kakhulu ngeli phulo, into enokubiza kakhulu kwaye ichithe ixesha ukwenza enye into: Baxinanise uluhlu oluchanekileyo lweeColts Fans kunye ne-Twitter.
Ycinge! Intengiso enkulu ifuna isiseko sedatha esicocekileyo, esichanekileyo. Ukuphuhliswa kwetekhnoloji entsha enje nge-Twitter kuthetha ukuba kukho iindlela ezintsha zokufikelela ebantwini, kodwa kwangaxeshanye, kuluncedo olukhulu ukukwazi ukudibanisa abalandeli kwiiakhawunti ze-Twitter.
Jonga, njengomzekelo, kumsebenzisi we-Twitter @Stroke. Ungamxelela ukuba ungumlandeli omkhulu weNFL ngokufunda iiTweets zakhe. Kodwa akukho ndlela yokwazi ukuba ungubani, kuba lo msebenzisi akabonisanga igama kwiprofayile yakhe ye-Twitter. Ngapha koko, abantu abaninzi basebenzisa i-alias, igama lokuqala okanye igama lesidlaliso kwi-intanethi. Akukho ndlela ilula yokunxibelelana nayo yonke idatha esemthethweni onokuba nayo komnye umntu, efana nembali yokuthenga, iziseko zedatha, njl.
Kodwa ngoku, uJim Irsay (kwaye wonke umntu) uyazi ukuba @ DeadStroke96 ngu UGeorge Ketchman. Kubonakala ngathi ngamakhulu — ukuba ayingomawaka — abantu ngokuzithandela abanike idatha ecocekileyo, echanekileyo yolukhuphiswano. Intloko ngaphaya koPhando lweTwitter ukuze uzibonele. (Ungakhangela i "#gocolts @jimirsay footballs" ukunciphisa iziphumo.)
Enye yeendlela eziphambili zokuba ukwandisa imveliso kukutshintsha umsebenzi uye kwabanye abantu. IiColts zinokuchitha iiyure ezininzi zilandelela bonke abalandeli bakaJim Irsay, bejonga iiprofayili zabo kunye neetweets zabo ukuzama ukumisela amagama abo apheleleyo asemthethweni. Okanye, banokuqhuba ukhuphiswano olufanayo abanokulufumana, kwaye bavumele abantu bazenzele umsebenzi.
Umsebenzi olungileyo, uJim Irsay kunye neqela lokuthengisa leColt!
tags: iitsholeujim irsayurhwebo
URobby Slaughter kukuhamba komsebenzi kunye nengcali yemveliso. Ujoliso lwakhe lunceda imibutho kunye nabantu ukuba basebenze ngakumbi, basebenze ngakumbi kwaye baneliseke ngakumbi emsebenzini. URobby uhlala enegalelo kwiimagazini ezininzi zengingqi kwaye udliwanondlebe naye ziimpapasho zesizwe ezinje ngeWall Street Journal. Incwadi yakhe yamva nje ngu Iresiphi engafezekisekiyo yeMicimbi yeNethiwekhi.. URobby ubaleka a Ukuphuculwa kwamashishini Nkampani.
UGoogle kunye neAMEX bavelisa iiVidiyo zasimahla zoShishino oluNcinci
NgoJanuwari 3, 2011 ngo-3:20 PM
Kodwa…. ngaba yayixabisa i-$30,000? Kwaye ngaba baya kwenza nantoni na ngedatha?
NgoJanuwari 3, 2011 ngo-5:24 PM
Licebo elihle…kodwa yintoni iROI? Ukuqala kwam ukufunda i-tweet malunga nentengiso ngoMgqibelo @jimirsay wayenabalandeli abamalunga ne-18,000+. Ndisandula ukujonga kwaye ngoku yi-20,000+. Ngaba ixabiso lalilingana namawaka amabini abalandeli abatsha?
NgoJanuwari 3, 2011 ngo-6:11 PM
Ndiyathandabuza ukuba ixabiso lalisondele kwi-30k yeedola. Siyazi ukuba ibiyimali eyi-$4k ubuncinane. Kungenzeka ukuba bafumana imoto ngaphandle kweendleko ezithe ngqo ngokutshintshiselana norhwebo oluthile.
Ukuba iiColts zisebenzisa idatha, ke ewe, ixabisa i-4,000 yeedola. Kuya kuthatha iqela elikhulu iiveki ezininzi ukuwela ireferensi kubo bonke abalandeli baka-Irsay nabantu bokwenyani, kwaye oko akunakugubungela uninzi lwabasebenzisi be-Twitter ongenakukwazi ukubafumana.
Ewe kunjalo, kukho olunye ulwazi: Nabani na unokufumana olu luhlu ngoku, hayi iiColts kuphela. Oko kufanele kukuxelela enye into ngeli phulo.
NgoJanuwari 3, 2011 ngo-10:37 PM
Kuya kufuneka kwakhona ukubala iindleko 'zeqela elikhulu' ngoko. Yithi unokutshekisha umntu om-1 rhoqo ngemizuzu emi-3, okanye ama-20 ngeyure. Kubalandeli abangama-20,000, ujonge iiyure eziyi-1000 zomsebenzi. Phosa loo nto kwisithuba esifanelekileyo se-$10/yeyure yokungena kwedatha, kwaye ukwenye i-$10,000 ngexabiso. Ngoku ubuyele ku-$14,000 ukuba imoto isimahla, $30,000+ ukuba ikwisaphulelo.
(Owu, kwaye ungcono ukuba baqalise kuyo namhlanje ngaphambi kokuba uphendle.twitter.com isule yonke into malunga neveki hahahaha! 🙂 )
Ndicinga ukuba u-Irsay OMKHULU kwi-buzz yokwakha, ukwenza abantu bathethe, njl. Kwaye ndicinga ukuba sonke singathanda ukuba asebenzise idatha njengoko inokuba njalo, kodwa ngokwenene andicingi ukuba iyenzeka.
Yintoni eyona njongo yakhe? Yenza abantu bathethe kwaye bavuyiswe ngamaColts (kunye naye), kwaye uqhubeke ubonisa ukuba unemali eninzi kwaye unokunika izinto. Ngaba waphumelela koko? Ewe.
NgoJanuwari 3, 2011 ngo-10:22 PM
I-ROI ayikho nje kubalandeli baka-Twitter uSteve. Ayikho indlela onokuthi ulinganise ngayo i-ROI yento ethontsizayo ngolu hlobo. Ayisiyonto yokuba bangaphi abalandeli u-Irsay anayo malunga nobuso bombutho ofumana upapasho kwidolophu yonke. Heck iphantse yalixabisa kuyo yonke i-pub abayifumana kwiigeek zentengiso ezifana nathi. Imidlalo ithengiswa ngaphandle kwangethuba ukuze ngaphandle kweentengiso zentengiso iiColts azinandawo yokuphucula i-ROI yazo ngokwelizwi ngalinye.
Jan 4, 2011 kwi-2: 07 AM
IiColts zinokufumana ingeniso ngamatikiti… kodwa incinci ifunyanwa ngenkxaso. Abaxhasi bahlawula amanani amakhulu. Ngokungafaniyo nenkampani eqhelekileyo, abalandeli bamaqela ezemidlalo bahlala bejikeleza. Ke umbuzo ongcono unokuba - lithini ixabiso lobomi bomlandeli weColts…. kwaye ngaba uJim Irsay wenza nayiphi na abalandeli beColts ngokwenza oku? Ndicinga ukuba usenokuba unayo. Abantu badiniwe ngamaqela ahlala ethatha… olu luphawu oluhle lokubuyisela kancinci.
joe umenzi wezihlangu
NgoJanuwari 11, 2011 ngo-2:45 PM
Ayisiyo ROI, abalandeli, okanye iindleko. Imalunga ne-egomaniacal ramblings ye-billionaire enemali eninzi kunengqiqo. Ndithetha ukuba ngenene…uhlawule i-1M yeedola ngekatala kaJerry Garcia. Ngaba ngokwenene ucinga ukuba ixhala malunga $30k?
Jan 12, 2011 kwi-3: 45 AM
Ngelixa ndivuma ukuba imali kunye nengqiqo akukho nto idibanisayo, andiqinisekanga ukuba ndiyavuma ukuba i-Irsay yi-egomaniacal. Kwiimeko ezininzi, i-Irsay yenze konke okusemandleni ukunqanda ukukhanya. Ndisebenza nabanye abanonxibelelwano oluninzi naye kwaye bandixelele ukuba ungumfana omangalisayo onentliziyo ethambileyo. Ukuba uyaphanda, uya kufumanisa ukuba ugcina imibutho yesisa eninzi ihamba apha e-Indiana.
Jan 12, 2011 kwi-2: 45 AM
ngubani ngokwenene ophumelele imoto?
NgoJanuwari 3, 2011 ngo-3:32 PM
Ndikunye noBrad kule, uhlobo. URobby wenza ingqikelelo enkulu yokuba iiColts ziya kusebenzisa ulwazi. Ndiyathandabuza okona kulungileyo kulo mphambili ndibona ukuba banenye yezona zinto zimbi (kuba ziphantse zangabikho) ubukho kwindawo yentlalo yeqela lepro. Ngoku inikwe abalandeli babo ukuba benze okuninzi kwibhidi yabo kubo kwi-intanethi kwaye kulungile kodwa ngoku u-Irsay ethumela umyalezo wakhe wengqondo kwaye enikezela ngamatikiti kunye neemoto akuthethi ukuba umbutho ulumkile. Iiparamitha zokhuphiswano zikhomba kumntu onolwazi oluthile lwe-Twitter olungena endlebeni kaJim. Mhlawumbi uDoug kunye nomhlobo wakhe uPat Coyle banokuthetha neeColts njengombutho ongcono kunam. Elinye ixabiso kule nto ngabaxhasi bexesha elizayo. AbakwaToyota bafumene i-pub enkulu kule nto, nangona bebenokufumana uncedo olungakumbi kuJim kunye nabathengisi babo basekhaya mhlawumbi abazange bayikhuthaze kwaye bayisebenzise njengoko babenako. Inkampani ye-savvy yentlalontle efuna iqabane kunye neeColts iya kuba ikhotha i-chops yayo kwisivumelwano esinje. Iindleko kwiiColts mhlawumbi zazingeyonto yemoto okanye zithotywe kakhulu ngenxa yentsebenziswano yeToyota kunye neqela (imoto mhlawumbi ixabisa iqela elingaphantsi kwe-$ 20k ukuba liyihlawule) IiColts njengeqela zaziza kufumana i-traction engaphezulu ukuba ibhaso lalingaphezulu. yakhiwe ngeenxa zonke kubo kunye nemveliso yabo kodwa ukwazisa akwenzi buhlungu. Yinto entle kakhulu ukubona iitweets zika-Irsay zingahluzwa kodwa ngokwembono yokuthengisa ndisabona ithuba elininzi kunye negumbi lokuphucula.
NgoJanuwari 3, 2011 ngo-6:07 PM
Okanye mhlawumbi uRobby unolwimi lwakhe oluqinileyo esidleleni sakhe.
Ukuba kunjalo, udlale kakuhle mhlekazi.
NgoJanuwari 3, 2011 ngo-10:24 PM
NgoJanuwari 11, 2011 ngo-2:43 PM
Uyibhiliyoni. Uchitha i-30k yeedola ephuma ebhedini. Ngokunyanisekileyo, akukho malunga nemali. Imalunga ne-ego.
Jan 4, 2011 kwi-4: 24 AM
Ukhazimle kakuhle ndingatsho.
Jan 4, 2011 kwi-4: 26 AM
Ngokwemigaqo kaJim Irsay yemoto/yemali yokuphisa, i-tweet kufuneka ibandakanye igama lakho njengoko livela kwilayisensi yakho yokuqhuba. Nangona le inokuba yeenjongo zokumbiwa kwedatha, ndicinga ukuba ibikukuthintela ukuqhatha. Wayenomda we-tweet-per-person; ubungafanelanga ukuba neetweets ezininzi. Umthetho othi "igama elipheleleyo" utyhafise ukuqikelela okuninzi kumntu oneakhawunti ezininzi zikaTwitter.
NgoJanuwari 11, 2011 ngo-2:41 PM
Andinasizathu sokukholelwa ukuba kukho nasiphi na isixa sobuchule emva kwentengiso. Ingozi eyonwabileyo, kodwa hayi genius.
NgoJanuwari 15, 2011 ngo-6:54 PM
Kuhlala kuthobeka xa umntu odumileyo (@jimirsay) ejoyina uTwitter kwaye wodlula inani labalandeli okuthathe iminyaka ukubaqokelela… kwiiveki ezimbalwa!